Samy manana ny fiainany… | NewsMada
Samy manana ny fiainany…
Par Taratra sur 03/01/2017
Ny arahaba toy ny fary lava vany, ka tsy lany hamamiana. Ary ny fanaovam-belona? Raha iny taona 2016 iny, navesatra ho an’ny vahoaka ifotony: tsy fandriampahalemana, delestazy, fidangan’ny vidim-piainana, tsy fanjarian-tsakafo, kere… Manginy fotsiny, ohatra, ny gidragidra lava noho ny ady tany, indrindra ny tany robain’ny Sinoa amin’ny famelana azy hitrandraka harena an-kibon’ny tany… gaboraraka.
Niaina izay niainan’ny vahoaka amin’izay heverina ho dingana kely vita hanamaivanana ny fahasahiranam-piainana andavanandro ve ny mpitondra amin’izany? Eny, na izay heverina ho fihatsaram-piainana aza… Resaka ka atao, tian-kateza. Tsy hita izay hoe fihatsaram-piainana amin’ny sarambabem-bahoaka ifotony amin’ireo lafiny voatanisa ireo. Fahavoazana sy fiharatsiam-piainana aza no niseho tetsy sy teroa.
Firifiry, ohatra, ny fitaovana simba noho ny delestazy? Vitavita ho azy. Toy izany koa ny rava fananana, naratra, namoy ny ainy… noho ny tsy fandriampahalemana. Eo ny rava fananana na simba tontolo iainana noho ny ady tany sy ny famelana ny vahiny hanjakazaka, tsy misy fifampierana na filazana mialoha. Tsy hitahita ho azy avokoa ireny. Nitondra inona amin’izay hoe dingana kely ho amin’ny fihatsaram-piainana?
Tsy nisy tan-tsoroka nataony fanjakana foibe amin’izay fanamaivanana ny fahasahiranam-bahoaka izay. Eny, na nisy aza, ohatra, ny hoe vatsin’ankohonana: tsy mahahenika ny rehetra, indrindra izay tena sahirana manerana an’i Madagasikara. Toy izany koa ny amin’ny asa tana-maro: tsy mahavelona, tsy maharitra, tsy mendrika ny maha olona… Miady irery hatrany amin’ny andavanandrom-piainany ny vahoaka ifotony.
Tsy misy politika mazava amin’izay fanamaivanana ny fahasahiranam-bahoaka izay? Miady irery amin’izay dingana kely azony atao na mety vitany ny isan-tokantrano. Tsy misy valaka amin’izay manjo ny vahoaka izay iainan’ny mpitondra? Na mizaka ny tsy eran’ny ainy amin’ny efa fahasahiranana noho ny kolikoly avo lenta, tsy fangaraharana, tsimatimanota, kiantranoantrano, fampihorohoroana…
Aiza ny tokony hirariam-pahombiazana amin’izany raha tsy misy ny fiovana sy fanovana?